Amine sy Amide miasa
Klôroida asidra matavy
Klôroide amôniôma amonoum Octadecyl
Chloride Diotyl Dimethyl Ammonium
N, N, N ', N ”, N” -Pamine methyl diethylene triamine
Chloride asidra matavy (0812)
Chloride asidra matavy (0816)
Chloride asidra matavy (1214)
Chloride asidra matavy (1218)
Sehatra fampiharana an'i betai ...
Fampidirana ny fahalalana fototra ...
Fampiharana Surfactant i ...
Toetra mampiavaka ny am ...
Asa sivy an'ny cationic ...
ampiana hoe: 1711 #, Building 6, Lingyu, Guihe Jinjie, Luneng Lingxiu City, Distrikan'i Shizhong, Jinan City, Sina
Toetra mampiavaka ny surfactants amine oxide
1. Solubility amin'ny rano
Satria misy fatorana polar N → 0 ao amin'ny molekiola amine oksida, ary ny fotoana dipole dia 4.38D, ny fitambarana dia manana ny toetran'ny polarity avo sy ny teboka miempo ambony. Mora voarohirohy ao anaty solvents polar toy ny rano sy alikaola ambany izy io, saingy zara raha voalefaka Ho an'ny solvents tsy polar toy ny menaka mineraly sy benzene.
Ao amin'ny vahaolana aqueous, amine oxide dia misy amina habe be amin'ny endrika hydrate (R1R2R3NO · XH2O), fa amin'ny fiovan'ny sanda pH dia hiova ny polarity. Ohatra, ao amin'ny vahaolana alkaline miaraka amin'ny pH> 7, surfactant anionika indrindra izy io. . Na izany aza, amin'ny vahaolana asidra ao amin'ny pH <3, ny oksida amina dia misy indrindra amin'ny endrika cations [R1R2R3NOH] +. Ny vahaolana aqueous an'ny amine oxide dia manana toetra malemy amin'ny oxidizing, ary ampiasaina amin'ny kosmetika izy io mba hahatonga ny hoditra ho fotsy.
2. Asa atao ambonin'ny
(1) Fihenjanana ambonin'ny tany: aorian'ny fampidirana oksida amina dia hihena be ny fihenjanana amin'ny rano. Ohatra, ny fihenjanan'ny rano madio dia 72,80 × 10-3N / m. Ny fihenjanana amin'ny haavon'ny tsiranoka mikraoba (cmc) misy oksida amina isan-karazany dia manodidina ny 30 × 10-3N / m. Amin'ny cmc, ny fihenjanana amide oksida amina dia ambany lavitra noho ny an'ny sira amonioma ampahefatra, noho izany dia tsara kokoa ny asan'ny oksidana amine noho ny an'ny sira amonium ampahefatra.
(2) Fanadiovana: Rehefa ampifangaroina amin'ny AES na AS ny oxide amine, dia misy fiatraikany synergistic amin'ny fandotoana azy io, fa rehefa afangaro amin'ny LAS dia tsy dia tsara ny vokariny synergistic. Ny vokatra fanasana lokomena dia manadio asidra matavy 12% (C12: C18 = 12: 1), surfactant tsy ionika 13%, 12% LAS. Raha ampidirina amina oksida amina dia tena tsara ny fanadiovana.
(3) Herin'ny emulsifying: ny hery emulsifying dia famantarana iray handrefesana ny kalitaon'ny emulsifiers. Ohatra, emulsify ny vahaolana amine oksida amine sy solvent solika ao anatin'ny toe-javatra mitovy amin'ny 70 ° C, ary avy eo jereo ny fiovan'ny habetsaky ny emulsification. Ny valiny dia mampiseho fa ao amin'ny homolog amine oksida amina dia mitombo ny fahaizan'ny emulsification amin'ny fitomboan'ny isa karbonika ao amin'ny vondrona alkyl chain. Endri-javatra iray hafa amin'ny amine oxide ho emulsifier dia ny ahafahany emulsify amin'ny sanda pH isan-karazany, indrindra amin'ny haino aman-jery asidra, dia mety hifanaraka amin'ny cations ammonium quaternary ho toy ny preservatives sy bakteria, fa tsy hanakana ny fampisehoana anti-corrosion an'ny ny preservative, ary afaka manatsara ny fahombiazany manohitra ny harafesina, izay tsy takatry ny surfactants tsy ionic hafa.
(4) Fanamafisana ny foza sy ny foza: ny oksida amina dia mpiorina matevina mahomby indrindra, matetika ampiasaina amin'ny ranon-damba na fanasan-damba fanasana lovia. Ny vokatra misy fatrany 1% ka hatramin'ny 5% dia misy fatra malefaka, tsy misy mahasosotra ny maso, ary manohitra ny rano mafy. Manana fahombiazana tsara izy io, ary ambony kokoa ny foam ao anaty rano mafy misy pH = 9, 300mg / kg. Rehefa afangaro amin'ny amine oxide ny sodium sulfate (sodium) alikaola matavy, feno sy milamina ny satroka na dia misy menaka aza dia tsy hiova izany. Noho izany, matetika izy io dia ampiasaina miaraka amin'ireo mpiasa mavitrika anionika toy ny LAS, AS, AES, SAS, sns., Ary misy vokany tsara fanoherana ny fahasosorana. Ny sombin-kavoakan'ny amine oxide dia misy tsiranoka malefaka ary be mpampiasa amin'ny shampoos sy ny vokatra avy amin'ny shower.
Rehefa mihoatra ny laharam-pahamehana ny fatran'ny oksida amine, dia misy dingana afovoany matevina be. Na dia ampitomboina aza ny mari-pana dia tsy azo ovaina ho dingana isotropika izy io. Noho izany, rehefa amboarina amine oksida dia matetika 30% ny vahaolana aqueous azo alaina, izay sarotra ny mahazo Ho an'ireo vokatra misy fifantohana avo kokoa dia tsy maintsy ampiana surfactants anionika hahazoana vokatra fatra avo lenta amin'ny vokatra oksidia amoniôma.
（4） Fifanarahana amin'ireo surfactants anionika
Ny fahombiazan'ny surfactants amphoteric amideoteroka amine dia somary malefaka ihany. Ny surfionant anionika sy ny oksida amine dia ampiasaina amin'ny famolavolana detergent marobe mba hampihenana ny fahasosoran'ny surfionant anionika ary hahazoana vokatra manokana. Rehefa ambany kokoa noho ny cmc ny fifangaroan'ny amine oksida, ny fampifangaroana amin'ireo surfionant anionika mba hananganana anion sy cations dia hampitombo ny pH ny rotsakorana, izay ateraky ny fironana protonation an'ny amine oxide; amin'ny cmc, ny micelles mifangaro miendrika roa; avo Ao amin'ny cmc, ny anion sy ny sira cation dia miorina amin'ny micelles mifangaro.
Rehefa pH≥8, amine oxide dia maneho toetra tsy ionic ary azo ampifangaroina amin'ny anion; rehefa pH≤8, ny fifanarahana amin'ny anion dia hamokatra faritra tsy mety simba, ka miteraka rotsakorana; rehefa pH≤6, dia atambatra amin'ny refy mifanaraka amin'izany ny roa. Ny amine oxide sy ny anionika surfactant dia mitambatra mba hananganana mpivady anion-cation hamorona vahaolana mangarahara. Amin'ity fotoana ity, ny sira anion-cation dia soloina anaty micelles surfactant be loatra. Raha dimethyl amine oxide no ampiasaina fa tsy dimethyl amine oxide, dia ho tsara kokoa ny mifanentana; raha nosoloina amine oxide misy polyoxyethylene ether ether dia ny vokany no tsara indrindra.
(5) poizina ara-batana
Amine oxide dia singa tsy misy poizina na ambany poizina. Ny vahaolana stock stock dia misy fahasosorana voalohany amin'ny hoditry ny bitro, ary somary mahasosotra ny maso. Amin'ny fifantohana 2%, tsy misy ny fahasosorana; efa nohanina sy nopetahana alkyl dimethyl nandritra ny roa taona. Amine oxide, tsy misy karsinogenesis nateraky ny amine oxide hita. Ny biodegradability ny amine oxide dia tsara, 88% dia mety ho simba aorian'ny 2 herinandro sy 93% ao anatin'ny 4 herinandro. Amine oxide amin'ny ankapobeny dia tsy misy poizina ary ambany dia ambany ny fahasosorana amin'ny hoditra sy ny maso. Araka ny tatitry KLein: ny LD50 an'ny amine oxide dia 2000mg / kg ～ 6000mg / kg, izay saika mitovy amin'ny LD50 ny sira latabatra 4000mg / kg. Rehefa afangaro amin'ireo mpiasa mavitrika hafa, ny amine oxide dia manana toetra manohitra ny fahasosorana ary azo ampiasaina amin'ny shampoos anti-dandruff mba hampihenana ny fahasosoran'ny ZPT. Ho fanampin'izany, amin'ny shampoos misy asidra sy vahaolana asidra, ny amine oxide dia afaka mifandray amin'ireo vondrona carboxyl amin'ny volo sy ny hoditra. Izy io dia afaka mametaka ny volo, mampihena ny fikororohana, mora mando, ary manatsara ny hamafin'ny hoditra.
Ny alkyl amine oxide dia misy fiasan'ny bakteria sasany, saingy tsy mahatratra ny toetran'ny bakteria mahery amina amonioma quaternary izany. Na izany aza, ny vokatra an-tsokosoko misy amida oksida dia manana ny antiseptika manokana, izay afaka misoroka ny fitomboan'ny bobongolo ary mitazona hetsika avo lenta amin'ny vahaolana tena maloto. . Ny oksida amina amina sasany aza dia mampiseho toetra bakteria avo kokoa, ary ampiasaina amin'ny savony toy ny deodorants bakteria, ary na dia misy bakteria misy iode aza dia namboarina mba hampitomboana ny fahalefahana sy ny fahamarinan-toerana iode ary mitana anjara toerana lehibe amin'ny fanamorana sy ny fiaraha-miasa. Anisan'izany, ny vokatry ny dodecyl dimethyl amine oxide amin'ny fanakanana ny fitomboan'ny Staphylococcus aureus dia mitovy amin'ny an'ny surfactant cationic mifanaraka aminy, raha toa ka mahantra kosa ny vokatry ny fanamorana ny oksida amina hafa.
Ny amine oxide dia manana hygroscopicity avo sy fironana ionisasi, ary afaka mamorona sarimihetsika mitohy mitarika eo ambonin'ny fibre na résin, noho izany dia manana toetra antistatika tena tsara izy. Raha ampitahaina amin'ireo mpitsikilo antistatika hafa dia ny fiovana amin'ny hamandoan'ny tontolo iainana, ny fiatraikany antistatika dia misy fiovana kely, ary mampiseho fahombiazana antistatika tsara na dia eo ambanin'ny hamandoana ambany aza. Ny amine oxide koa dia misy fahamarinan-toerana mafana sy hamandoana tsara, afaka mifanaraka amin'ny menaka fanosotra, emulsifiers ary agents antistatic hafa, ary mora ampiasaina.
Ny amine oxide dia tsy vitan'ny hoe misy azy fotsiny amin'ny vahaolana hypochlorite, fa manampy ihany koa ny surfactants hafa hampiorina ny hypochlorite, noho izany dia be mpampiasa amin'ny sterilization sy detergents desinfection.